१२ असार, तेह्रथुम । जिल्ला अस्पताल तेह्रथुममा शल्यक्रिया गरिएकी सुत्केरीको पाठेघरमा समस्या भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ । म्याङ्लुङ नगरपालिका–५, अम्फुवाकी २७ वर्षीय दिलु लिम्बूको शल्यक्रिया गरी प्रसूति गराइए पनि पाठेघरमा समस्या आएपछि मंगलबार मध्याह्न काठमाडौँ लगिएको हो । दिलुको जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक प्रसूति कक्षमा आइतबार शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराइएको थियो । उहाँले […]
भुटेको मकैका फाइदाहरु
तपाई हामीमध्ये कतिपय भुटेका मकैका पारखी छौँ होला । भुटेको मकैको स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा गर्छ । यी हुन भुटेका मकैका फाईदाः १. भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन् । २. भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको […]
पानी मानिसको शरीरका लागि जरुरी तत्व हो । शरीरको ७० प्रतिशत भाग नै पानीबाट बनेको हुन्छ । यो कमी भयो भने शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरु बाहिर निस्कन पाउँदैंन । यसका अलावा शरीरका लागि जरुरी अक्सिजन पनि प्राप्त हुँदैंन । यसैले गर्मी होस् या चिसो, हरेक मौसममा पर्याप्त पानी पिउनु पर्छ । । गर्मीको समयमा शरीरमा पानीको […]
उपक्षेत्रीय अस्पतालमा थप सेवा विस्तार
१२ असार, डडेल्धुरा । यहाँको उपक्षेत्रीय अस्पतालले शिशु सघन कक्ष एनआइसियु, इण्डोस्कोपी र स्वचालित उपकरणसहितको प्रयोगशाला र थाइराड सेवा विस्तार गरेको छ । उक्त सेवा सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अब यस अस्पतालले विगतको भन्दा अझ उत्कृष्ट सेवा दिन सक्षम भएको बताउनुभयो । प्रदेश नं ७ का दुर्गम स्थानमा उपचारको […]
१२ असार, चितवन । चितवनस्थित डेंगु रोगको जोखिम क्षेत्रमा लामखुट्टेको बासस्थान खोजेर लार्भा नष्ट गर्न थालिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवनको अगुवाइमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उक्त अभियान थालिएको हो । आगामी साउन, भदौबाट डेंगु रोगको प्रकोप बढ्नसक्ने भएकाले सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित डेंगु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोजेर लार्भा र प्यूपा नष्ट गर्ने अभियान शुरु गरिएको जनस्वास्थ्य […]
१२ असार, बर्दिया । ओरेक नेपाल बर्दियाले छ महिनामा भए गरेका जिल्लाका १७६ वटा लैंगिक हिंसासम्बन्धी घटना सार्वजनिक गरेको छ । बर्दिया जिल्लामा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संघ संंस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अवस्थामा दुई वर्षदेखि बर्दिया जिल्लामा लैंगिक हिंसाविरुद्ध सक्रियरुपमा काम गर्दै आइरहेका ओरेक नेपाल नामक संस्थाले यस्तो प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । ओरेक […]
यस्ता छन् खाली पेटमा दूध चिया पिउदाको बेफाइदाहरु
बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ । कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन् । चिया धेरै नेपालीले पिउने पेय पदार्थमा पर्छ । अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हानी हुनसक्ने देखाएका छन् […]
अञ्चल अस्पतालको सेवालाई थप प्रविधियुक्त र प्रभावकारी बनाउने : मन्त्री यादव
११ असार, नेपालगञ्ज । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताललाई ५, ६ नं र कर्णाली प्रदेशको नागरिकको आवश्यकताका आधारका विस्तार गरिने बताउनुभएको छ । सो अस्पतालले आजदेखि प्रारम्भ गरेको डेक्सा स्क्यान तथा बोन हेल्थ ओस्टेकोप्रोसिस क्लिनिकको उद्घाटन गर्दै उहाँले भेरी अञ्चल अस्पतालको सेवालाई थप प्रविधियुक्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले […]
नेपालमा पुरुष नर्स पनि आवश्यक
११ असार, काठमाडौँ । पुरुष नर्स रत्न गुरागाईंलाई पुनः पुरुषलाई पनि नर्सको रुपमा समावेश गर्ने विषयले खुशी बनाएको छ । ‘देशलाई पुरुष नर्स पनि आवश्यक छ नि’ उहाँले भन्नुभयो । विसं २०४३ मा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा नेपालमा पहिलो ब्याचका रुपमा पुरुषले नर्सिङ पढेका थिए । सोही ब्याजका नर्स हुनुहुन्छ गुरागार्इं । रासससँग […]
हेपाटाइटिसजस्तै रोग देखा प¥यो
११ असार, दार्चुला । दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका– ३ मा हेपाटाइटिससँग मिल्दोजुल्दो रोग देखा परेको छ । एकैचोटी सो ठाउँका पाँच जनामा हेपाटाइटिस रोगको जस्तै लक्षण देखा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुुख डा सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । उपचारका लागि स्वास्थ्यचौकीमा पुगेका बिरामीमा एकैखाले लक्षण देखा परेकाले रोग देखिएको हो । उनीहरुमा आँखा पहेँलो हुने, ज्वरो […]
काँक्रो खाँदाको फाइदा
काँक्रो गर्मि मौसममा धेरै लाभदाहि मानिन्छ । यसमा ९६ प्रतिशत पानि हुन्छ । काक्रा हामी तेतिकै खान सक्छौ भने यसलाई आचार बनाएर पानी खान सकिन्छ । कहिँ गर्मिमा हिनेर गलेको आवस्था छ भने काक्रा खादा निकै आनन्द महसुस हुन्छ । साथै काँक्रोका अन्य फाइदाहरु पनि छन् । काँक्रो खाँदाको फाइदाहरु: १. काँक्रोले युरिक एसिडको लेभललाई […]
च्याउवाट हुने फाइदाहरु
च्याउका परिकार निकै स्वादिलो हुने कुरामा दुइमत छैन । च्याउ जति स्वादिलो हुन्छ यो स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ । च्याउको सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई सन्तुलित गर्ने देखि लिएर स्तन क्यान्सर तथा प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्ने र मधुमेहको खतरालाई पनि घटाउने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । मोटोपन घटाउने देखि लिएर सरीरको रोग […]
१० असार, नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले भोलि सोमबारदेखि ओपिडी सेवा शुरु गर्ने भएको छ । ओपिडी सेवा सञ्चालनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको व्यवस्थापन र सबैखाले उपकरण जडान गरिसकेको छ । अस्पताल परिसरमा शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले ११ गते […]
आलेख : खरिद र वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा औषधिको अभाव
५ असार, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरका ६५ वर्षीय जनार्दन पौडेलको घुँडामा समस्या छ । दुखाई कम हुँदैन । सकी नसकी घाँस दाउरा गरिरहेको अवस्थामा भेटिनुभएका पौडेलले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा प्रायः कुनै पनि औषधि नपाइने गुनासो गर्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो – “पोखरा गएर दबाई लिएर आएँ । अहिले अलि सन्चो भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा […]
५ असार, चितवन । चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ उपकरण खरीद र जडान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अठार वर्षअघि स्थापना भएको सो अस्पतालमा पुराना उपकरणले काम नगर्दा र नयाँ उपकरण नथपिँदा बिरामी सेवाका लागि अन्य निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुँदै आएका छन् । चीन सरकारको सहयोगमा एशियाकै नमूना अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने […]